राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्काे शुल्कवृद्धीको विरोधमा संसदमा प्रतिनीधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले यसो भने ः – Rajmarg Online
राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्काे शुल्कवृद्धीको विरोधमा संसदमा प्रतिनीधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले यसो भने ः
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्चा हुँदै गर्दा दङालि जनताहरूमा निकै उत्साह थियो । आफ्नै जिल्लामा मेडिकलको पढाइ हुने भयो र सबै खालको सेवा सुबिधाले सम्पन्न हुनेछौ । कुनै पनि प्रकारका विरामीहरू रिफर हुनु पर्दैन भनेर खुशिले गदगद भएका थियो तर आजको सदन दङ्गालि जनताहरूको उत्साह र खुशि ठिक उल्टो भएका छ ।
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसि संगिता भण्डारीको दादागिरिको कारण कर्मचारीहरू समेत आँतकित अवस्थामा छन् । जागिर जाने भयो भनेर संसकित अवस्थामा छन् ।
यस्तो पिडाको अवस्थामा दङालीहरू कसरी खुशि हुन सक्छन ? सुखि नेपालि बनाउने नेपाल सरकारको नारा सहमति हुने आभास कसरी पाँउन सक्छन् ? स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाउने सरकारको नारालाई च्यालेन्ज गर्ने गरि निर्धारण गरेको शुल्क तुरून्त फिर्ता लिने, साढन महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारिहरूलाई तलबको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, राप्ति उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा संयोजन गर्नु पर्ने र बन्द गराइएको पोषण गृहलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धि निकायलाई निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु ।
अन्यथा दङालि जनताहरूका लागि राप्ति स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अभिसाफ र काग लाइ बेल पाक्यो हर्ष न बिसमात जस्तै हुनेछ । यस्तो अभिसाफ सिद्ध हुने कुनै पनि प्रतिष्ठान हामलाई चाहिन्न । दङालिहरूलाई सेवा र सुविधा चाहिएको हो न कि कसैको नियुक्तिको लागि प्रतिष्ठान । यदि कसैले दादतगिरि गर्न खोज्छ भने दादागिरिको प्रतिबाद दाङका जनताहरूले गर्न जानेका छन् । स्वतन्त्रताको नाममा कसैलाई पनि मनपरि गर्ने छुट छैन ।
(चौधरी दाङ क्षेत्र नम्वर १बाट विजयी नेकपाका सांसद हुन)